wasiirka Arrimaha Dibada dalka Kenya Muddane Kolonzo Misayoka ayaa hogaamiyayaasha Siyaasada Soomaalida ee shirka wadahadalada Nabada ee ka socda dalka Kenya ka codsadey in ayan la kulmin ama war siin suxufiyiinta.
Wasiirka oo qaddo sharaf u sameeyey hogaamiyayasha Siyaasadda Soomaalida ayaa u sheegay in laga bilaabo maalinta sabtiga uu furan yahay shirkii wada tashiga ee siyaasiyiinta Soomaalida ee ku sugan Nairobi.
Maanta ayaa hogaamiyayaasha Soomaalida la dejiyey Safar Park Hotel si uu wadahadal foolfool ah u yeeshaan iyagoo aan cidna ku dhex jirin.
Wada tashigii maanta bilaaban lahaa ayaa dib u dhacey ka dib markii lagu heshiin waayey tirada hogaamiyayaasha wada tashiga ka qayb galaya.
Dhanka kale waxaa la sugayey in ay yimaadaan maanta hogaamiyayaasha ku maqan Soomaaliya,walow ay horey balan uga qaadeen Madaxweynaha dalka Uganda in ay shirka wada tashiga sii wadaan 20-joogta iyo cabdi qasim.
Golaha Badbaadinta,kooxda ururada Bulshada, siyaasiyiinta soomaalida ,IGAD iyo beesha Caalamka ayaa wali taagan 42-qof in ay wada tashiga ka qayb galaan ee 10-berri ka dhci doona Safari Park Hotel oo ku yaala Magaalada Nairobi.
wasiirka arrimaha Dibada Dalka Kenya Muddane Kolonzo Misayoka iyo wakiilada Beesha Caalamka ayaa ilaa 3-berri ugu danbeysay wadey in ay ogolaadaan hogaamiyayaasha in ay la fariistyaan in ka maqan wada tashiga oo dhan17-qof o ay IGAD iyo beesha Caalamka ku sheegtay dad aan looga maarmin wadatashiga Nabada Soomaalida ee ka socda Nairobi.
Cabdiqasim Salaad iyo Cabdullaahi Yusuf oo ..............
Madaxweynaha Dawlada KMG Soomaaliya Dr.Cabdiqasim Salaad Xasan ayaa shaley booqasho ku tagey Guriga uu degan yahay Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Puntuland Cabdullahi yuusuf Axmed ee ku yaala agagaarka Madasha shirka wadahadalada ee Mbagathi.
Booqashadan ayaa ka danbeysay ka dib markii uu Cabdullaahi yuusuf horey ugu soo booqdey safari Park hotel Cabdiqasim iyo wafdigiisa maalinta uu Magaalada Nairobi.
Kulankan labada hogaamiye ee soomaaliyeed ayaa ah mid gaar u ah ,in kastoo aan la shaacin arrimaha ay ka wada hadleen .
warar la isla dhex maraya ayaa sheegaya in ay wadaan habkii iyo wadadii lagu bilaabi lahaa shirka wada tashiga Nabada soomaalida oo socon doona muddo toban maalmood,warar aan la xaqiijin ayaa la sheegaya in labada dhinac sameysteen min 6-guddi oo isa soo horfariista si fool ka fool ah.